Gịnị kwesịrị ịbụ ịzụ nwa hypersensitive | Bezzia
Maria José Roldan | 07/01/2022 22:40 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Mmetụta bụ ihe e bu pụta ụwa n'ime mmadụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ime na e nwere ndị nwere mmetụta uche dị otú ahụ karịa ndị ọzọ. N'ihe banyere ụmụaka, ihe ahụ e kwuru n'elu bụ ihe ịma aka nye ọtụtụ ndị nne na nna.
N'isiokwu na-esonụ, anyị na-egosi gị ihe ndị nne na nna kwesịrị ime. ọ bụrụ na ha ahụ na ụmụ ha nwere mmetụta uche dị elu karịa ụmụaka ndị ọzọ.
1 Ihe ndị nne na nna nke ụmụaka nwere mmetụta siri ike kwesịrị iburu n'uche
2 Kedu ka esi amata ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere hypersensitive
3 Otu esi azụ nwa hypersensitive
Ihe ndị nne na nna nke ụmụaka nwere mmetụta siri ike kwesịrị iburu n'uche
Nwatakịrị hypersensitivity ga-egosipụta nnukwu nlebara anya na nkọwa niile na obere ihe ndị gbara gburugburu ya gburugburu. N'ịbụ ndị chere nke a ihu, ndị nne na nna kwesịrị ịtụle ịzụ nwa ha n'ụzọ dị nnọọ iche n'echiche ụmụaka ndị ọzọ.
N'ihe banyere ụmụaka nwere hypersensitivity. ijikwa mmetụta uche dị mkpa ma dị oke mkpa. Nlekọta a na-enye ohere ka nwatakịrị a na-aza ajụjụ zere ịta ahụhụ site na nsogbu ụfọdụ dị ka ịda mbà n'obi.
Kedu ka esi amata ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere hypersensitive
Enwere ọtụtụ akụkụ nke na-egosi na nwatakịrị na-enwe mmetụta karịa ka ọ na-adị:
Ọ bụ banyere ụmụaka ndị nnọọ ewepụrụ na ihere.
Ha na-azụlite ọkwa ọmịiko karịa nkịtị.
Ha na-enwe oge siri ike na mkpali siri ike dị ka isi ma ọ bụ mkpọtụ.
Ha na-egwukarị egwu Na naanị.
Ha nwere ọkwa mmetụta uche dị elu n'akụkụ niile.
Ọ gbasara ụmụaka nnọọ ike.
Ihe ngosi na-akwado na-emesapụ aka ya na ụmụaka ndị ọzọ.
Otu esi azụ nwa hypersensitive
Ịzụlite nwatakịrị nwere mmetụta siri ike kwesịrị ịdabere n'elu ihe niile n'ịkụziri ya ịchịkwa mmetụta uche ya niile. Maka nke a, ndị nne na nna ga-agbaso usoro ntuziaka ma ọ bụ ndụmọdụ:
Ọ dị mkpa ka onye na-eto eto nwee mmetụta na ndị mụrụ ya na-akwado ya. Ịzụ nwa ma ọ bụ agụmakwụkwọ na-adị mfe ma ọ bụrụhaala na nwa ahụ nwere nnukwu obi ike na obi ike onwe ya.
Ịhụnanya na ịhụnanya n'akụkụ nke ndị nne na nna aghaghị ịdị na-aga n'ihu. Site nsusu ọnụ ruo na mmakọ, Ihe ọ bụla na-aga ma ọ bụrụhaala na ọ dị obere ka a hụrụ ya n'anya.
A ghaghị igosipụta mmetụta na mmetụta mgbe niile. Ndị nne na nna kwesịrị ikwu otú obi dị ha nke mere na njikwa mmetụta uche bụ ihe kacha mma.
N’otu aka ahụ, ndị nne na nna kwesịrị ịna-enyere ụmụ ha aka ịmata otú ha ga-esi na-ekwu ihe dị ha n’obi. Mmetụta ga-apụrịrị apụ ma zere nsogbu mmetụta uche dị ka nchegbu.
Ịmara otú e si ege ntị bụ akụkụ ọzọ bụ́ isi n’ezi nzụlite nke nwatakịrị nwere mmetụta nke ukwuu. Nge ntị a bụ isi ka ha wee chee na a ghọtara na a hụrụ ha n'anya mgbe niile.
Na nkenke, Inwe nwa nwere oke mmetụta abụghị njedebe nke ụwa maka nne na nna ọ bụla. Ọ bụ nwatakịrị nwere mmetụta ọmịiko karịa ndị ọzọ ma nwee ike inwe mmetụta mmetụta uche ya niile nke ukwuu. N'inye nke a, ịzụ ụmụ ga-agbaso usoro ntụziaka nke na-enye nwa ahụ aka ịma ka ọ ga-esi jikwaa na nyefee mmetụta ha niile n'ụzọ kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Gịnị kwesịrị ịbụ ịzụlite nwa hypersensitive
Akụ na ụba okirikiri na mkpa ya maka gburugburu ebe obibi